मेसी–रोनाल्डोभन्दा नेइमार र एमबाप्पे अब्बल ! - Everest Dainik - News from Nepal
मेसी–रोनाल्डोभन्दा नेइमार र एमबाप्पे अब्बल !
एजेन्सी । केपिएमजीको नयाँ प्रतिवेदनले लियोनल मेस्सी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोभन्दा नेमार जुनियर र एमबाप्पे मूल्यवान खेलाडी भएको देखाएको छ। केपिएमजी वित्तीय कारोबार तथा करको विवरण राख्ने विश्वव्यापी कम्पनी हो ।
उमेरसँगै खेलाडीहरु ओझेल पर्ने गरेपनि अर्जेन्टिनी लियोनल मेस्सी तथा पोर्चुगिज क्रिस्टियानो रोनाल्डो ३० बर्ष कटेर पनि आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सफल भएका छन्। मेस्सी विश्व चर्चित क्लब बार्सिलोनाबाट सक्रिय रुपमै खेलिरहेका छन्। क्रिस्टियानो रोनाल्डोपनि विश्वकै चर्चित इटालिएन यूभेन्ट्स क्लबबाट खेलिरहेका छन्।
एक दशकसम्म मेस्सी र रोनाल्डोलाई उछिन्ने खेलाडी कोही थिएनन्। बालुन डि’ओर तथा अन्य अवार्ड लगातार मेस्सी र रोनाल्डोले दश वर्ष जिते। यस वर्षदेखि भने मेस्सी र रोनाल्डोलाई टक्कर दिने खेलाडीहरु देखा पर्न थालेका छन्। यसवर्ष बालुन डि’ओर क्रोएसियाका मोड्रेचले जित्दा। मूल्यवान खेलाडीको सूचीमा समेत मेस्सी र रोनाल्डो पछि परेका छन्।
केपिएमजीको मूल्यवान सूची अनुसार ब्राजिलियन नेमार शीर्ष स्थानमा छन्। उनको मूल्य २२९ दशमलब १ मिलियन यूरो रहेको छ। यस्तै दोस्रोमा फ्रान्सका एमबाप्पे छन्। उनको मूल्य २ सय १५ मिलियन यूरो रहेको छ।
नेमार र एमबाप्पे एकै क्लब पिएसजीबाट खेल्दछन्। मेस्सी यस सूचीको तेस्रो स्थानमा छन्। तर रोनाल्डो निकै तल १२ औं स्थानमा पुगेका छन्। मेस्सीको मूल्य २०३ दशमलब ३ मिलियन यूरो रहेको छ भने रोनाल्डोको मूल्य १ सय ७ दशमलब ३ मिलियन यूरो रहेको देखाइएको छ।
यस्तो छ केएमजीको मूल्यवान खेलाडीको सूची
१- नेमार, पिएसजी– २२९ दशमलब १ मिलियन यूरो
२- एमबाप्पे, पिएसजी– मूल्य २ सय १५ मिलियन यूरो
३- मेस्सी, बार्सिलोना– २०३ दशमलब ३ मिलियन यूरो
४- मोहम्मद सलाह, लिभरपुल– १६८ दशमलब ३ मिलियन यूरो
याे पनि पढ्नुस एमबाप्पे चम्किँदा पीएसजीको शानदार जीत
५- ह्यारी केन, टोटनह्याम– १ सय ५१ दशमलब १ मिलियन यूरो
६- इदेन ह्याजार्ड,चेल्सी– १ सय ४८ दशमलब २ मिलियन यूरो
७- केभिन डि ब्रयुन, म्यानचेस्टर सिटी– १ सय २९ दशमलब ४ मिलियन यूरो
८- ग्रीजम्यान, एथ्लेटिको मड्रिड– १ सय २५ दशमबल ६ मिलियन यूरो
९- पल पोग्बा, म्यानचेस्टर यूनाइटेड– १ सय १९ दशमलब ३ मिलियन यूरो
ट्याग्स: Mbappe, messi, Neymar, ronaldo